I-DSA ngayinye ihlukile. Ukuxilongwa kufanele futhi kube -Kokuqeqeshwa Komqondo
I-DSA ngayinye ihlukile. Ukuxilongwa kufanele futhi kube.
Ulapha: Ikhaya » Okwabazali » Imiphumela Yokufunda Okuthile (i-DSA) » I-DSA ngayinye ihlukile. Ukuxilongwa kufanele futhi kube.
Silandele ku-Facebook ukuze uhlale uvuselelwa emidlalweni emisha, izivivinyo, ukubuyekezwa kanye nama-athikili!
Kaningi emsebenzini wethu sizwa ngokuxilongwa 'kwe-DSA' noma izinqubo zokuxilonga ezihamba zifuna inkinga ethile yokufunda (DSA); lezi yizinto zokuhlola ezifaka ngaphandle kokwehla kokuqonda futhi zifuna izinkinga zokufunda esikoleni (ukufunda, ukubhala nokubala), kube sengathi lokhu kwanele ukuchaza ubunzima besikole somfana. Ngakho-ke sifuna ukugqamisa ezinye zezici ngokuvamile 'ezikhohliwe': i-dyslexia a ukuthola ukuxilongwa ngaphandle (kanye nalokho kwe-dyscalculia, dysorthography kanye ne-dysgraphia) e kunomehluko omkhulu phakathi kwabafana abanesidina. Manje ake singene ngemininingwane ethe xaxa.
Asikho isivivinyo sokuthola ukuthi cha dyslexia kepha ukuhlolwa kukhona ukuthola ikhono lokufunda, ukubhala nokubala, izivivinyo "zokuphonsa" i izinga lobuhlakani, kanye nokuhlolwa kokulinganisa i amakhono olimi, Qaphela, ngekhanda, amasu... Kepha akukho kwalokhu kuvivinywa kukodwa okwanele ukubeka eyodwa ye-DSA. Ngalo mqondo, azikho izivivinyo ezithile ze-dyslexia.
Lapho ingane ilethwa kithi ukuze ihlolwe ngenxa yobunzima bokufunda esikoleni, akufanele sifune dyslexia kepha kufanele siphenye izimbangela zalobu bunzima (Attenzione? Memory? Nekunoma? ulimi? Ukuzenzakalela kokufunda, ukubhala noma ukubala? ...).
Vele uhlole i- QI nokufunda esikoleni kuzoqinisekisa ukuthi obunye ubunzima obuningi abunakwa obungaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwezifundo futhi, kulwazi lwethu, ngisho nangaphezu kwezinkinga zokufunda, ukubhala nokubala. Izikhathi eziningi sisebenzisana nabazali ababona ubunzima ezinganeni zabo futhi abangazitholi izincazelo ezenzakalelayo ekuxilongeni 'kwe-DSA' abayitholile (labo, njengoba kushiwo, banqunyelwe ukuhlolwa kwe-IQ, ukufunda, ukubhala nokubala) : ubunzima ekwakheni inkulumo, ukuqonda imibhalo ebhaliwe noma izincazelo zomlomo, ekugxiliseni isikhathi esidingakalayo sokwenza imisebenzi yesikole noma umsebenzi wesikole, izinkinga ekuhleleni nasekuphatheni imisebenzi yakho (ukuqala nokwenza umsebenzi, ukulungiselela isikhwama sasemuva, bhala phansi imisebenzi okufanele yenziwe futhi uqinisekise ukuthi iqediwe), inkumbulo engemihle ... bonke ubunzima non bangachazwa ngohlolo lwe-IQ (albeit multicomponential) noma ilebula yokuxilonga, okungukuthi, i-DSA. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi zikhona futhi ezinye izivivinyo kufanele zisetshenziswe obekuvumela ukuqonda okuqonde kakhudlwana kobunzima bomfana. Ake senze ezinye izibonelo:
The ulimi ngokuqonda (BVL, I-PPVT, I-TROG2, i-TCGB, i-Burns, Ukuqonda kwe-NEPSY-II Imiyalo, Ukuqondisisa kwe-Syntactic kwe I-BVN 5-11, Ukuhlolwa Kwethokheni kwe I-BVN 12-18...), ekukhiqizweni (i-BVL, iBrizzolara, i-Lexical Denomination ye-BVN 5-11 neye-BVN 12-18, iGeneration of Phrases of the BVN 12-18, Fast Designation of the NEPSY-II ...) naku-metaphonological factor (CMF, Ukugcizelelwa kwemininingwane kwe-NEPSY-II…)
Kungakufanele ukubhekwe ukunakwa kwezici ezingxenyeni zabo ezahlukahlukene (Ukukhetha Okubukwayo Kokubhekisisa kanye Nokunakekela Ukucwaninga Okukhethiwe kwe I-BVN 5-11 futhi we I-BVN 12-18, Ukunakwa Kwabacwaningimabhuku kanye Nesethi Yokuphendula ye-NEPSY-II, Ukunakwa Kwabacwaningi Nokuhlolwa Kwe-CP BIA...)
Izici ezahlukahlukene ze. Akufanele neze zinakwe imisebenzi ephezulu njengokuvinjwa, ukuvuselelwa kwe inkumbulo yokusebenza, ukuzivumelanisa nezimo kokuqonda, ukushelela nokuhlela (I-Elithorn Perceptual Maze Test ngu I-BVN 12-18, ukuhlolwa kwe-London of London kufakwe I-BVN 5-11, ku-BVN 12-18 naku- TOL, I-Ranette Test, ukuhlolwa kwe-MF14 ne-MF 20, iNumerical Stroop, i-Alternative Phrase Completion, i-Strategic Memory Test, konke ku-Test BIA, I-Inhibition equkethwe ku-NEPSY-II, i-Phonemic Fluence kanye neForcygraphical Fluence equkethwe ku-BVN 5-11 naku-BVN 12-18 BVS-COURSES, i-Memory of Figure kanye nokuBhalwa kabusha Kwezincwadi nezinombolo ze-WISC-IV ...)
Amakhono we nokugcinwa (Ukukhetha Ukufunda IZwi, Ukuphindwa Kwamagama Namagama kanye Nokufunda Amagama Ngamagama I-BVN 5-11, Imemori Ekhethiwe Yamagama ne-Supra-Span Position Memory ye I-BVN 12-18, izivivinyo ezahlukahlukene eziqukethwe ISIQEPHU, i-Memory Narrative Memory and Memory of Lists of NEPSY-II)
... Futhi uhlu lungaqhubeka ngokuqhubekayo!
Njengoba sibhekene nazo zonke lezi zinto, ezingathandabuzi imiphumela yokufunda kwesikole, singacabanga ngempela yini ngokunciphisa ukuhlolwa kwengqondo kuhlolo lwe-IQ (imvamisa iWISC-IV)? Ukwenza kanjalo kuzoba ukusho ngokuphelele ukuthi usunqumile ukuthi yikuphi ukuxilongwa: i-dyslexia ngaphandle kolunye uhlobo lobunye ubunzima. Sifisa ukuthi konke kube lula kakhulu kepha iqiniso ukuthi i-DSA akuvamile ukuba iziveze ngendlela eyedwa, okungukuthi, ngaphandle kobunye ubunzima (ulimi, ukunakwa, inkumbulo ...). Ngaphezu kwalokho, phakathi kokuhlaziya okujulile okwenziwe ngezivivinyo ezithile, akuyona into engjwayelekile ukuthola amandla angempela, ngokwesibonelo enkundleni yezomlomo noma ye-mnemonic, futhi namandla angeqiwe, uma kunikezwa inkulumo enkulu eyenziwe ukufundisa ngokwezifiso.
Umehluko phakathi kwabantu abanesidina
Kukhulunywa kaningi futhi kufanele ukuthi umuntu onesifo esihlukile kwesinye isifo ngokuxilongwa okufanayo 'futhi uma kuyiqiniso, ukuhlolwa kwe-neuropsychological kumele kuveza umehluko. Uhlelo Olusaziwa Ngobuntu Lokufunda (PDP) OLUFANELE luthathe umehluko kulokhu. Asisho kuphela kokwehluka ku-IQ, ekufundeni, ekubhaleni nasekubaleni ubunzima noma ebunzimeni bezinhlamvu. Ukuthatha kancane ingxoxo eyenziwe ephuzwini elidlule, siyaqonda umehluko ezicini ezahlukahlukene ze-neuropsychological. Ngakho-ke kuzodingeka ukwazi ukuthi uma kukhona ubunzima bezilimi, noma obudlule, futhi lokhu kuzodingeka kuhlolwe ngokuningiliziwe ngoba izinkinga ezihlobene nomongo wefoni noma ukufinyelela kwe-lexical (ukumane unikeze izibonelo ezimbili) kuvame ukuba nemiphumela ehlukile futhi ebonakalayo ekufundeni kwesikole. Noma ku-sphere-executive sphere kunomehluko omningi, ngokwesibonelo, phakathi kwezinkinga zokuxakaniseka kwezikhathi ezivulekile kanye nokushoda okuhlobene nokuphoqelela, imemori yokusebenza noma ukuhlela. Inkulumo efanayo ingenziwa mayelana nememori. Ngokuvamile kuthiwa ama-dyslexics ayazabalaza ukukhumbula imininingwane kepha ayilona iqiniso ngaso sonke isikhathi futhi, lapho ikhona, ukugqama kungaqokonyiswa phakathi kwendawo nenye (isibonelo, ngomlomo nangokubukwayo). Kwesinye isikhathi amakhono okufunda we-mnemonic empeleni angaphansi kwalokho okulindelwe yobudala bomuntu obuhlolwayo, kwezinye izikhathi aphakama kakhulu.
Ngabe kunengqondo-ke ukwenza iHlelo Lokufunda elenzelwa umuntu uqobo elingakucabangeli lokhu kwehlukana komuntu ngamunye? Uyithatha kanjani le nto uma ukuhlolwa kokuxilonga kukhawulelwe encazelweni eqinile ye-DSA (IQ ekufundeni kwesikole okujwayelekile nokungenele, kuya ngokweqile)? I-PDP kumele icabangele amandla nezimo ezahlukahlukene umfundi angabhekana nazo ubunzima futhi afinyelele kulokhu kuyadingeka ukuthi ukuhlola okuxilongayo akuyona 'okwakwa-DSA' kepha kunalokho ukuhlolwa okuyikho okuzama ukuqonda imvelaphi ubunzima, noma ngabe banjani.
Ukuxilongwa kwe-dyscalculia, ukuxilongwa kwe-dyslexia, ukuxilongwa kwe-dysorthography, ukuxilongwa kwe-dsa, dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, dysorthography, DSA, Ukuhlolwa kwe-Dyscalculia, ukuhlolwa kwe-dysgraphia, ukuhlolwa kwe-dyslexia, ukuhlolwa kwe-dysorthography, ukuhlolwa kwe-dsa
I-DSA ngayinye ihlukile. Ukuxilongwa kufanele futhi kube.2017-02-082020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/02/diagnosi-dsa.jpg200px200px
Izinkinga zokufunda: kufanele kutholakale ukuthi isifo sitholakele nini?Imibhalo, Ukuqonda kanye nokufunda, Ukuphazamiseka Okuthile Kwokufunda (i-DSA), i-DSA, i-DSA, i-Diagnosis, Ukubona ukuphazamiseka okuthe ngqo kokufunda (i-DSA), Amathuluzi, Ukuhlola
Amatafula we-Times: ngoba ukuphikelela ekubambeni ngekhanda akudingekile (nezinye iziphakamiso zomsebenzi)Imibhalo, i-DSA, i-DSA